လက်ဖက်ရည်ပူပူလေး နေ့တိုင်းသောက်တာက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ (၂) ဆတိုးနိုင်ပါတယ်… In:Kawi Eats, Others
ကဝိတို့ မြန်မာတွေ တစ်နေ့ကို လက်ဖက်ရည်ဘယ်နှစ်ခွက်လောက် သောက်လေ့ရှိကြပါသလဲ??? တိကျတဲ့ စာရင်းကောက်ထားတာမျိုးမရှိပေမယ့် မြန်မာတို့ လက်ဖက်ရည်ကြိုက်ကြတော့ ငြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုတာက မြန်မာတို့ရဲ့ ရိုးရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပါ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တတ်တဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဓလေ့လေးကလည်း အခုထိရှိနေဆဲပါ။ ဒါကြောင့် ဒီအကြောင်းလေးကို မပြောမဖြစ်ပြောဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ လက်ဖက်ရည်ကို ၆၀ ဒီဂရီထက်ပိုတဲ့အပူချိန်မှာ သောက်နေကျဆိုရင် အစာပြွန်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်တဲ့။ CNN ရဲ့ Health သတင်းတစ်ခုမှာပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ လေ့လာချက်တစ်ခုအရ လက်ဖက်ရည်တစ်နေ့ကို (၇၀၀) မီလီလီတာ ဒါမှမဟုတ် ခွက်ကြီးနှစ်ခွက်စာလောက်ကို ၆၀ ဒီဂရီအထက် အပူချိန်မှာသောက်တယ်ဆိုရင် လက်ဖက်ရည်ကို အေးမှသောက်တတ်တဲ့ လူတွေထက် ၉၀% ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေပိုရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ဖက်ရည်သောက်တဲ့အခါ အစာအိမ်ကိုသွားတဲ့ အစာအိမ်ပြွန်ကိုဖြတ်ပြီးဆင်းသွားတာကြောင့် သောက်တဲ့လက်ဖက်ရည်တွေက ၆၀ ဒီဂရီထက်ကျော်တဲ့ အပူချိန်မှာဆိုရင် အစာပြွန်တွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ လောင်ကျွမ်းနေသလို ဖြစ်စေတာကြောင့်ပါ။ ဒီတော့ လက်ဖက်ရည်မှမဟုတ်ပါဘူး ၆၀ ဒီဂရီကျော်တဲ့အပူချိန်မှာရှိတဲ့ ဘယ်အရည်မျိုးကိုမဆို နေ့တိုင်း ခဏခဏသောက်လေ့ရှိတယ်ဆိုရင် အစာပြွန်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ ဒါက ဆေးလိပ်တို့၊ အရက်တို့က လူကိုဒုက္ခပေးသလို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောဂါ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ အစာပြွန်ကင်ဆာက ကမ္ဘာမှာ ၈ ခုမြောက်အများဆုံး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို လူပေါင်း ၄သိန်းလောက် ဒီကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ဖက်ရည်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းလေးအအေးခံပြီးမှ သောက်ကြနော်… Crd Link : https://cnn.it/2FHf4gL ...
အစားတစ်လိုင်း သူငယ်ချင်းတွေတော့ ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီလေ In:Kawi Eats, Others
လွယ်လည်းလွယ်၊ မြန်လည်းမြန်တဲ့ last minute prank လေးတွေ!!! ၁။ Mayonnaise Donut Prank ဒိုးနပ်ကြိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို “ငါ ဒိုးနပ်ဝယ်လာတယ်ဟေ့” ဆိုပြီးတော့သာ ပြောလိုက်ပါ။ သင့်သူငယ်ချင်းအငတ်လေးတွေ ၀မ်းသာအားရနဲ့ လာပြီးစားချိန် ဒိုးနပ်ထဲက cream တွေအစား၊ mayonnaise တွေစားမိသွားလို့ အီသွားမယ့် မျက်နှာတွေကိုမြင်ယောင်ကြည့်လိုက်နော်!! 😝😝😝 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ၂။ Microwave Soap Prank ဆပ်ပြာတုံးတစ်ခုကို microwave ထဲထည့်ပြီး အပူပေးလိုက်ပါ။ Home-made cake တစ်ခုလို ပွတက်လာပါလိမ့်မယ်။ အစာငမ်းပြီး စားမိတဲ့သူတွေကတော့ ရှလွတ် … ပါးစပ်ထဲက ပူဖောင်းတွေတောင်ထွက်လာဦးမယ်။ 😅😅😅 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ၃။ ရှုးရှဲ မုန့်လုံးရေပေါ် Prank သင်္ကြန်လည်းနီးပြီဆိုတော့ အခုနေ မုန့်လုံးရေပေါ်ကျွေးရင် ဘယ်သူမှငြင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ အဲဒီတော့ အကုန်အကျလည်းသက်သာအောင် ထန်းလျက်တွေထည့်လုံးမနေနဲ့တော့ ငရုတ်သီးစိမ်းတွေသာထည့်လုံးပေတော့။ ……………………………………………………………………………………………………………………………… ၄။ သွားတိုက်ဆေး Oreo Prank ဒါလေးကတော့လွယ်ပါတယ်။ Oreo ထဲက cream လေးတွေကို ဓားနဲ့ခြစ်ထုတ်၊ သွားတိုက်ဆေးကိုထည့်သုတ်လိုက်ရုံပဲနော်။ Flavor အသစ် ပူရှိန်းရှိန်း Oreo ပေါ့။ ……………………………………………………………………………………………………………………………… ၅။ ထမင်းပေါ်ကို ဆားလေးဖြူး Prank ထမင်းကလည်း အဖြူရောင်၊ ဆားကလည်း အဖြူရောင်ဆိုတော့ ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ ပိုမသိသာစေချင်ရင် အပေါ်ကမဖြူးဘဲ နယ်ထားပေးလိုက်ပါ။ ငန်ကျိကျိဖြစ်နေတဲ့ ထမင်းကို စားမိတဲ့ မျက်နှာကြီးကိုကြည့်ပြီး ထိုင်ခွီနေပေတော့။ 😜😜😜 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ၆။ ရေထဲပါ ဆားထည့် Prank ထမင်းငန်ငန်တွေစားမိပြီး ရေပြေးအသောက်၊ ရေကလည်း ငန်ကျွတ်နေတာနဲ့ ကွက်စတိနော်။ 😂😂😂 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ၇။ ရေဗူး မျက်လှည့် Prank ဒီ prank ကတော့ လူတိုင်းသိပါတယ်။ တော်တော်များများသိတဲ့ မျက်လှည့်ဖြစ်တာကြောင့် ရုပ်တော့တည်ထားဖို့လိုမယ်နော်။ ရေဗူးကို အဝတ်တစ်ခုခုနဲ့ဖုံးထား၊ ပါးစပ်က တွေ့ကရာ ဂါထာတွေရွတ်ပြီး သူငယ်ချင်းကို ရေဗူးထဲမှာဘာရှိလဲကြည့်ခိုင်းပြီး၊ သူကြည့်နေတုန်း ရေဗူးကို ညှစ်ချလိုက်ပါ။ ...